प्रोसेसर इन्टेल कोर i3-3240 , 2800 मेगाहर्ट्ज को आवृत्ति, गुणन कारक 32 छ ग्राफिक्स इन्जिन 1050 मेगाहर्ट्ज सेट गरिएको छ: विशेषताहरु निम्नानुसार छन्। स्मृति नियन्त्रक यो मामला मा प्रदान गरिएको छ।
प्राविधिक प्रक्रिया 22 एनएम लाग्छ। सबै मा, त्यहाँ दुई कोर को मोडेल छन्। अधिकतम ब्यान्डविथ प्रति सेकेन्ड 25 जीबी छ। 35 वाट को स्तर मा गर्मी को प्यारामिटर। वर्थ प्रोसेसर को इंटेल कोर को i3 (बजार मूल्य) बारे9हजार को। RUB।
सीपीयू बौद्धिक स्मृति ठूलो रकम समस्या बिना डाटा अनुमति दिन्छ। यो मोडेल को वास्तुकला आर आर लागू हुन्छ। यो कर्नेल गतिशील रूप प्रयोग उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण पनि छ। आफ्नो अनुकूलता संचार प्रणाली को संचालन द्वारा सुनिश्चित छ। एमआई बस अतिथि सीपीयू सहायक। घडी आवृत्ति यो5भन्दा बढी मेगाहर्ट्ज छ। डाटा को प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली बस मार्फत हुन्छ। को CPU देखि इन्टरफेस "Kvik पैट।" प्रयोग गरिन्छ आदेशहरू एक मानक सेट तिनीहरूलाई प्रदान गरिएको छ। नियन्त्रक सिस्टम संग कुराकानी गर्न एक एसएएस छ।
सीपीयू इंटेल कोर i3-3240 चार सूत्रहरू ह्यान्डल गर्न एक समयमा सक्षम छ। आधारभूत कार्यहरु यसलाई प्रदान गरिएको थियो। सीधा अर्डर नियन्त्रित आज्ञा तिरुत्तानी प्रणाली। यो सीपीयू प्रक्रिया निर्देशनहरू राम्रो copes भनेर याद महत्त्वपूर्ण पनि छ।
तपाईं विशेषज्ञहरु विश्वास गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि यो मोडेल तपाईं उच्च प्रदर्शन लागि आवश्यक सबै कुरा छ। आधारभूत एकाइ आवृत्ति 3.4 GHz छ। पालो मा, मूल्याङ्कन शक्ति 83 वाट छ। गणना चक्र को गति वृद्धि गर्न समारोह "टर्बो" प्रदान गर्दछ। केन्द्रीय प्रोसेसर पावर अपव्यय प्रयोगकर्ता विनियमित गर्न सक्षम छ।
मोडेल को ग्राफिक्स सहायक इंटेल कोर i3-3240 विभिन्न आवृत्तियों मा बनाए छ। यसलाई विभिन्न इन्टरफेस को प्रजनन को लागि अत्यावश्यक छ। साथै, सीपीयू सहायक गर्दा व्यक्तिगत कम्प्युटर उपकरण जडान डाटा स्थानान्तरण दर वृद्धि गर्न डिजाइन गरिएको छ।
यस मामला मा 1.2 मेगाहर्ट्ज गर्न ग्राफिक्स सहायक विचार, स्मृति पहुँच निकै वृद्धि भएको छ। यसलाई 1200 x 720 पिक्सेल को संकल्प 24 हर्ट्ज को एक आवृत्ति मा बनाए छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण पनि छ। यो प्रोसेसर मा "अध्यक्ष" समारोह छ।
"प्रत्यक्ष" इंटेल कोर i3-3240 सीपीयू शृंखला 11.1 स्थापित। तपाईं विशेषज्ञहरु 'राय विश्वास गर्नुहुन्छ भने, सबै प्रमुख आवेदन मञ्चहरूमा यो प्रदान गर्दछ। यस मामला मा, APC प्रयोग इन्टरफेस को प्रकार। मल्टिमिडिया डाटा प्रशोधन लागि "प्रत्यक्ष" सिस्टम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेसम्म यो भिडियो संसाधन सम्बन्धित कुनै पनि समस्या समाधान गर्न डिजाइन गरिएको छ। जिब्रो "Libero" मात्र सिस्टम "खुला ग्राफ" काम गर्न सक्छन्। यो केन्द्रीय प्रोसेसर द्वारा समर्थित छ। तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ भने विशेषज्ञहरु, क्रूसमा-मंच सफ्टवेयर प्रणाली संग पूर्ण पारस्परिक व्यवहार गर्दछ। तीन-आयामी ग्राफिक्स समस्या को फलस्वरूप अक्सर देखिन्छन्।
यसलाई फाइलहरू रूपान्तरण गर्न आउँदा, बस प्रणाली "द्रुत भिडियो" सम्झना। यो प्रविधि एकदम मल्टिमिडिया फाइलहरू साथ काम सरल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सबै को पहिलो यो वेब मा जानकारी को आवास प्रदान गर्दछ। यो सिस्टम "द्रुत भिडियो" तपाईं डाटा सम्पादन गर्न सम्बन्धित समस्या धेरै हल गर्न अनुमति दिन्छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण पनि छ। तर, यो मल्टिमिडिया परियोजनाहरू सिर्जना महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
प्रविधि "परिचय" केन्द्रीय प्रोसेसर इन्टेल कोर i3-3240, दुर्भाग्यवश, समर्थित छैन। तथापि, त्रिविम भिडियो समस्या धेरै अक्सर देखिन्छन्। "ब्लू-रे" "परिचय" सिस्टम को सट्टा ढाँचामा काम गर्दछ "द भित्रिया।" सबै को पहिले कुनै पनि समस्या बिना सना इन्टरफेस प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। यो पनि आवाज गुणस्तर सुधार गर्न डिजाइन गरिएको छ। यस मामला मा, ultrabook संग संचार उत्कृष्ट सुनाउँछन्। ढाँचा 1080 सिस्टम समर्थित।
हामी एक प्रिमियम सामाग्री को स्थानान्तरण कुरा भने, यो उल्लेख गर्नुपर्छ प्रविधि "Vireles"। यो सिस्टम पीसी उपकरणहरू धेरै समस्या समाधान गर्न डिजाइन गरिएको छ। कार्यक्रम द्वारा प्रदान प्रसारण भिडियो सक्रिय छैन। यस मामला मा इन्टरफेस "फ्लेक्स" को प्रकार द्वारा समर्थित छ। यो तपाईं एकैचोटि दुई च्यानलहरूमा जानकारी प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ। यस मामला मा एकीकृत ग्राफिक्स मंच पूर्ण कार्यक्रम को लागि संचालित छ। "फ्लेक्स" को इन्टरफेस स्वतन्त्र तस्बिरहरू काम गर्न सक्षम छ पनि छ।
इन्टेल प्रोसेसर समीक्षा, यो कार्यक्रम "खाली" उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ। भिडियोको सहायता संग थप रंगीन र व्यावहारिक हुन्छ। पहिलो प्रणाली डाटा को इन्कोडिङ संलग्न छ। र भिडियो संसाधन को गति वृद्धि गर्न डिजाइन गरिएको छ "खाली"। ग्राफिक्स सहायक डाटा इन्कोडिङ मा जोडिएको छैन।
फ्रिक्वेन्सी प्रविधि वृद्धि गर्न
गतिशील रूप इंटेल कोर i3-3240 प्रोसेसर को आवृत्ति वृद्धि गर्न "टर्बो बुस्ट" को एक प्रणाली छ। सबै को पहिले सेट 2.1 को एक श्रृंखला हो कि उल्लेख गर्नुपर्छ। ऊर्जा विकल्प "टर्बो बुस्ट" मा कुनै प्रभाव छ। तर, यो प्रोसेसर overclock गर्न सक्षम छ एकदम सरल छ। यस मामला मा, सीमा आवृत्ति सूचकांक समायोजन गर्न सम्भव छ। सुनिश्चित गर्न डाटा सुरक्षा प्रणाली "प्रो" स्थापित छ।
यो भनेर फाइलहरू व्यवस्थित गर्न मद्दत आदेशहरू एक सेट छ। साथै, सिस्टम विभिन्न जानकारी आक्रमण सामना गर्न सक्षम छ। प्रविधिहरू प्रयोग "प्रो" धम्की धेरै चाँडै निष्प्रभावी। अर्को सिस्टम rootkits र मालवेयर काम गर्छ। आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ।
प्रविधि "हाइपर" इंटेल कोर i3-3240 प्रोसेसर समर्थित। यो तपाईं दुई स्ट्रिमहरूमा एकैचोटि काम गर्न अनुमति दिन्छ। यस मामला मा, डाटा प्रोसेसिंग धेरै छिटो छ। तर, यो प्रविधि छैन बहु-पिरोया आवेदन उपयुक्त छ। डाटा प्रसारण लागि कर्नेल अलग उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। virtualization प्रदान TX सिस्टम को क्षेत्र मा जानकारी प्रविष्ट गर्न।
सबै को पहिले यो एक-32 को वास्तुकला मा काम गर्दछ उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं विशेषज्ञहरु 'राय विश्वास गर्नुहुन्छ भने, डाटा उत्पादन एकदम छिटो छ। अक्सर यो प्रणाली प्रोसेसर "Itanium" मा स्थापित छ। नेटवर्क सुरक्षा, यो निकै बढ्छ। साथै, सिस्टम विशेष एक virtualized वातावरणमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न डिजाइन गरिएको छ।
मोडेल को प्रविधि "टेबल" उपलब्ध छ। धेरै उनको कार्यक्रम "दोस्रो ठेगाना" को रूपमा थाहा छ। अप प्रक्रिया गति, यो प्राय प्रयोग गरिन्छ। Virtualized आवेदन, प्रणाली समर्थन गर्दछ। यो सामान्यतया TX मंच मा 2-च्यानल जडान मा, "टेबल" काम गर्दछ। यो संग उपरि एकदम कम। यो "टेबल" एक virtualized वातावरणमा डाटा भण्डारण को गति असर भनेर याद महत्त्वपूर्ण पनि छ। तर, कुनै तरिका यो प्रविधि शक्ति खपत जडान।
डाटा सुरक्षा प्रौद्योगिकी
यो प्रविधि डाटा गुप्तिकरण लागि सीपीयू मा प्रयोग गरिन्छ। यसरी, फाइल पढ्न संग समस्या को धेरै धेरै चाँडै हल छन्। को annexes "तिथि Protekshn" सक्षम फरक काम गर्न। यसलाई संलग्न छ रूपमा डाटा गुप्त। तर, प्रणाली छैन अनियमित संख्या उत्पन्न लागि उपयुक्त छ। यो उद्देश्य प्रविधि "Kay।"
पहिलो र मुख्य यसलाई संख्या एक अद्वितीय संयोजन सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको छ। तपाईं सामना गर्न सक्नुहुन्छ यसको मद्दत गुप्तिकरण गरिएको डाटा। तर, बहु-पिरोया आवेदन संग, प्रणाली प्रतिक्रिया गर्दैन। अलग, यो "कुञ्जी" डाटा प्रमाणीकरण लागि प्रयोग गरिन्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। क्रिप्टोग्राफिक कार्यहरू यो मद्दत संग हल गर्न सकिँदैन।
परीक्षण र ग्राहक प्रतिक्रिया
इन्टेल कोर उपभोक्ताहरूको i3-3240 प्रोसेसर समीक्षा सामान्यतया राम्रो हुन्छ। दोहरी-कोर संस्करण बीच, यो मोडेल एक उच्च घडी आवृत्ति प्यारामिटर छ। परीक्षण को परिणाम आधुनिक खेल को बहुमत केन्द्रीय प्रोसेसर मध्यम सेटिङहरू आकर्षित गर्न सक्षम छ भने भनेर देखाउँछ।
स्पष्टताको लागि, एक ठोस उदाहरण विचार गर्न सक्छौं। हामी खेल नतीजा 4, त्यसपछि मध्यम सेटिङ मा 1920 x 1080 पिक्सल को एक संकल्प संग लिन भने प्रति सेकेन्ड 32 फ्रेम उत्पादन गर्छ। को इंटेल कोर i3 प्रोसेसर पर्याप्त छ कि औसत खेल चरणको, त्यसैले लागि9ths। RUB को मूल्य छ। यो जायज छ।
3 जी मोडेम टन सेट अप
दबाइ "Imunofan": सकारात्मक समीक्षा
Osipova Irina Viktorovna, एक रूसी बास्केटबल खेलाडी: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, खेल उपलब्धिहरू
के "निःशुल्क चलायमान" रुबल खतरनाक? किनभने केन्द्रीय बैंक "निःशुल्क पौडी" मा रुबल lowers के को?
मार्केटिङ रिसर्चहरू निकाल्दै
अद्वितीय बुना शाल Haruna